Fitsapana ny fahasalaman'ny biby - BALLYA
Fitsapana haingana BVDV omby
CVVV an'ny Flaviviridae sy Pestivirus.
Fitsapana haingana ny omby FMD
Aretina tongotra sy vava ny omby dia maranitra.
Fitsapana haingana ny brucellosis omby
Brucellosis dia aretina mitaiza mitaiza.
Tsindrio Eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny fitsapana aretina.
Momba ny fitsaboana ara-pahasalamana momba ny biby
Aretina omby sasany mahazatra
Ny aretim-pivalanana bovine (aretin-koditra) dia areti-mifindra ateraky ny Virus Bovine Virus Diarrhea (fohy ny BVDV an'ny virus Flaviviridae), ny omby amin'ny sokajin-taona rehetra dia mora tratran'ny aretina, ary ny omby tanora dia mora tohina indrindra.
Aretina tongotra sy vava
Ny aretin'ny tongotra sy ny vava amin'ny omby dia aretina mamindra, febrile ary mifandraika amin'ny artiodactyls ateraky ny viriosy amin'ny tongotra aman-bava. Izy io dia miavaka amin'ny fivontosana amin'ny mucosa am-bava, ny tratra ary ny hoho.
Brucella dia mety hiteraka brucellosis, antsoina hoe brucellosis, izay areti-mifindra maharitra izay misy fiatraikany amin'ny biby sy ny biby ary manimba kokoa. Any Chine, ny loharanon'ny aretina dia ny omby, ny ondry ary ny kisoa. Amin'ireny, ny ondry Brucella no mahery indrindra amin'ny fifindrany amin'ny olombelona, ​​miaraka amin'ny pathogenisite avo indrindra ary ny tena manimba indrindra. Ny brucellosis dia manimba ny rafitra fanabeazana aizana sy ny vatan'ny olombelona sy ny biby ary tena manimba ny fivelaran'ny fiompiana sy ny fahasalaman'ny olombelona.
Momba ny fivalanan'ny virus Bovine
Virosy BVD dia an'ny Flaviviridae ary Pestivirus. Izy io dia RNA tokana voafandrika, voan'ny valopy. Ireo fitaovam-pitsaboana vaovao dia voadona ratsy tamin'ny fizarana somary manify, ary voamarika ambanin'ny mikraoskaopy elektronika fa boribory ireo zana-tsimok'aretina ary manana savaivony manodidina ny 24-30 nm.
Ny viriosy dia mora tohina amin'ny solvents organika toy ny etera sy chloroform, ary azo ajanona. Mihamalemy tanteraka ny fampiatoana viriosy aorian'ny fitsaboana pancreatin (0.5 mg / ml, 60 minitra amin'ny 37 ° C), ary somary osa kosa ny virus amin'ny pH 5.7-9.3. Milamina, mihoatra an'io faritra io, dia mihena haingana ny areti-mifindra viral.
Ny loharanon'ny aretina dia ny biby marary indrindra. Ny tsiambaratelon'ny omby, ny excreta, ny ra ary ny spleen dia samy misy virus avokoa ary mifindra amin'ny fifandraisana mivantana na an-kolaka.
Ny teboka sy ny fery tsy mandeha amin'ny laoniny dia miseho indrindra amin'ny lalan-drà mandevon-kanina sy hozatry ny lymph, ny lava-bava (moka am-bava, gums, lela ary vavony mafy), pharynx, ary fitaratra orona. Ny mucosa esofagaly no mampiavaka indrindra ireo teboka lo. Misy rà mandriaka sy fery ao am-bava, esophagus, vavony marina ary aretin-tratra ny foetus voaongotra. Ny zanak'omby tsy mandeha dia afaka mahita mafy ny hypoplasia cerebellar sy ny hydrocephalus amin'ny lafiny roa amin'ny ventricle.
Manimba ny fivalanan'ny otrikaretina Bovine
Ny soritr'aretina lehibe indrindra dia ny tazo, fivalanana, kohaka ary fery moka, izay matetika mahatonga ny fihenan'ny ronono omby, mihena ny tahan'ny famokarana henan'omby, nefa koa miteraka fanalan-jaza ary miteraka fiterahana ary tsy fahatanterahana Aretina mety hiteraka fahavoazana lehibe amin'ny indostrian'ny omby.
Momba ny aretina tongotra sy vava
Virosy aretin-tongotra sy vava dia mahatsapa manokana ny asidra sy ny fotony. Amin'ny pH 3, very eo no ho eo ny aretina, ary ny 90% dia tsy miasa intsony ao anatin'ny iray segondra amin'ny pH 5.5; 1% ka hatramin'ny 2% ny sodium hidroksida na ny vahaolana 4% ny sodium bicarbonate dia mety hamono ilay virus ao anatin'ny 1 minitra. Ny viriosy dia afaka miaina mandritra ny taona maro amin'ny -70 ~ -50 ℃, ary afaka mamono ilay virus mandritra ny 1 minitra amin'ny 85 ℃. Ny pasteurized vita amin'ny ronono (72 ° C mandritra ny 15 minitra) dia mety hahatonga ny viriosy ho voan'ny virus. Amin'ny toe-piainana voajanahary, ny viriosy dia afaka miaina amin'ny volon'ny omby mandritra ny 24 andro ary maharitra mandritra ny 104 andro. Ny taratra ultraviolet dia mety mamono ny viriosy, ary ny etera, acétone, chloroform ary protease dia tsy misy fiatraikany amin'ny virus.
Ny virus dia mety hiparitaka amin'ny alàlan'ny fifandraisana, rano fisotro ary rivotra. Ny vorona, ny biby mpikiky, ny saka, ny alika ary ny bibikely dia samy afaka manaparitaka ny aretina avokoa. Ireo entana maloto isan-karazany toy ny akanjo fiasana, kiraro, fitaovana fahanana, fiara fitaterana, fihinanam-bilona, ​​vilona ary rano dia afaka manaparitaka ny viriosy sy miteraka aretina avokoa.
Ny aretina dia manana toetra mampiavaka ny epidemiolojika toy ny valan'aretina haingana, ny fiparitahan'ny habeny, ny fiandohana mafy ary ny fahavoazana lehibe. Ny tahan'ny zanak'omby dia avo kokoa ary ny hafa kosa manana taha ambany kokoa. Ny biby marary sy miafina no loharanon'ny aretina mampidi-doza indrindra.
Loza amin'ny tongotra sy vava
Ny soritr'aretina mahazatra dia fivontosana sy fery ao amin'ny vava, tratra ary kitrokely. Biby marary marobe no midoboka, tsy mihinana firy na tsy mety mihinana; ny fanaintainan'ny hoof dia miteraka fihintsanana na fianjeran'ilay akorandriaka aza. Ny aretina amin'ny ankapobeny dia ambany ny tahan'ny fahafatesan'ny olon-dehibe, manomboka amin'ny 1% ka hatramin'ny 3%, fa amin'ny zanak'omby kosa, ny fahafatesany dia avo noho ny myocarditis sy ny enteritis hemorrhagic.
Momba ny Brucellosis
Brucella dia bakteria miiba-Gram, tsy mihetsika, tsy misy kapsily (karazana malama miaraka amin'ny microcapsules), miabo ho an'ny anzima sy oksidase, tanteraka bakteria aerobika, afaka mampihena ny nitrate, Parasite intracellular, afaka miaina amin'ny karazana biby fiompy maro
Ny loharanon'ny brucellosis olombelona dia ny biby fiompy (ondry, omby, kisoa, serfa, saka, alika) izay voan'ny brucellosis. Amin'ny faritra fambolena sy fiompiana, ny tena mampidi-doza amin'ny olombelona dia ny ondry voan'ny brucellosis. Ny olombelona dia mamakivaky ny hoditra sy ny fonontsiran'ny moka, ny lalan-drà amin'ny fandevonan-kanina amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fanalan-jaza, tsiambaratelo, excreta (diky, urine), ronono, hena, taova anatiny, volony, ary rano maloto, tany, sakafo, rivotra ary vovoka avy amin'ny biby marary. Ny aretin'ny taovam-pisefoana an'ny brucella.
Ny vokatry ny aretina Brucella dia miovaova be ary mety ahitana ny aretin-tratra, spondylitis, thrombocytopenia, meningite, uveitis, neuritis optika, endocarditis ary aretina neurological isan-karazany.
Loza lehibe ateraky ny aretina omby famokarana ronono ary fitomboana omby omby. Ny fitsaboana ara-potoana sy ny fisorohana ny aretin'omby dia fomba lehibe hiatrehana ny aretin'omby.
Ballya manolotra kitapo fitsapana haingana ho an'ny aretina omby mahazatra. Ny valin'ny fitsapana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU, saingy tsotra ny fandidiana, ary fohy ny fotoana ary avo ny marina. Azo alamina ara-potoana izy io alohan'ny hanombohan'ny omby hampihenana ny fatiantoka ara-toekarena. Ballya dia hanohy ihany koa ny fandinihana ireo mpamantatra haingana momba ny aretina omby.